Fifidianana · Janoary, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Avaratra 26 Janoary 2008
Brezila: Mampifidy an'i Gabeira ho Ben'ny tanàna'i Rio de Janeiro
Amerika Latina 21 Janoary 2008
Tian'i Pedro Dória [pt] hirotsaka ho Ben'ny tanàna'i Rio de Janeiro ny depiote Fernando Gabeira [pt] ary mandresy lahatra ny tontolon'ny mpiblaogy (tontolom-bolongana na blogosphere) sy ny mpamaky rehetra izy hivondrona hampisongadina ny anarany. “Efa tonga ny fotoana hanaovana fampielezan-kevitra amin'ny aterineto amin'izay. Mety ho tratra ny tanjona rehefa maromaro isika...
Japana 19 Janoary 2008
Amerika Avaratra 16 Janoary 2008
Amerika Avaratra 15 Janoary 2008
Iran: Mpiandry revolisionera silamo sy i Hillary Clinton
Amerika Avaratra 10 Janoary 2008
Haji Washington no manoratra [Fa], fa raha marina ny filazana fa nohantsian’ny mpiandry revolisionera iraniana tsy tamin’antony ny sambo mpiady amerikana dia tian-dry zalahy handresy an’i Obama izay i Clinton. Nolazain’ny mpamaham-bolongana ary fa raha nanaiky ny mahavondrona mpampihorohoro ny Mpiandry Revolisionera ramatoa tao amin’ny antenimeran-doholona, Obama kosa nitsikera an-dRtoa...
Kenya : Hetsika Blaogy ho Filazam-panairana
Kenyà 10 Janoary 2008
Ny blaogy Black Looks dia mitatitra momba ny “Hetsika Blaogy ho Filazam-panairana” [Action Alert blog] any Kenya : Pambazuka News has created an Action Alert blog for up to date news and alerts on Kenya. « Ny vohikala Pambazuka News dia nametraka Hetsika Blaogy ho Filazam-panairana mba hanolorana ireo vaovao...